Blooming Ukugoqwa Kwamehlo - Umagazini Design
Ukugoqwa Kwamehlo Umklamo wamehlo kaSonja wawuphefumulelwa yizimbali eziqhakazayo nezimele zokuqala zokubuka. Ukuhlanganisa izinhlobo zezinto eziphilayo zemvelo nezinto ezisebenzayo zokubuka izinhlaka umklami waklama into eguqukayo engashintshwa kalula inikeze ukubukeka okuhlukahlukene okuhlukahlukene. Umkhiqizo futhi waklanyelwa ngendlela elula yokusonga, uthatha isikhala esincane ngangokunokwenzeka esikhwameni senethiwekhi. Ama-lens akhiqizwa nge-laser-cut plexiglass ene-Orchid flower prints, kanti ozimele benziwa ngesandla besebenzisa i-18k yegolide yethusi eyenziwe ngegolide.
Igama lephrojekthi : Blooming, Igama labaklami : Sonja Iglic, Igama leklayenti : Sonja Iglic.
Ukugoqwa Kwamehlo Sonja Iglic Blooming